Jooji inaad dhahdo feejignaanta ayaa yaraanaya, maahan! | Martech Zone
Talaado, Disembar 23, 2014 Talaado, Disembar 23, 2014 Douglas Karr
Waxaan jecel nahay waxyaabaha fudud ee fudud sida qofka xiga, laakiin waxaan aaminsanahay inay jirto fikrad khaldan oo weyn oo ka jirta warshadeenna. Fikradda ah feejignaanta dareenka ayaa sii yaraanaya wuxuu u baahan yahay xoogaa macno ah oo la dul dhigaa. Marka hore, gabi ahaanba waan diidanahay in dadku ay tamar yar ku bixinayaan waxbarida naftooda ku saabsan go'aankooda soo socda ee soo socda.
Macaamiisha iyo ganacsiyada waqti badan ku qaatay ka hor inta aan cilmi baarista la samayn wali cilmi baaris badan ayey wadaan. Waan orday Analytics wararka dhammaan macaamiisheenna ee loogu diyaar garoobayo qoraalkan mid walbana wuxuu leeyahay waqti badan oo uu kubixiyay bogga iyo waqti aad u badan oo lagu qaatay kalfadhi kasta marka la barbar dhigo 1 ama 2 sano ka hor. Waxaan ku sameyneynaa cilmi baaris qoto dheer waxyaabaha ku saabsan isla markaana waxaan aragnaa soo laabasho aad ufiican oo dhanka maalgashiga ah oo aan sii wadayno.
Waxa isbeddelay maahan dareenka, ee waa dadaalka ku lug leh helitaanka waxa ku jira. Raadiyayaashu hadda waxay ku fiicnaanayaan inay si dhakhso leh u aqoonsadaan waxa ay raadinayaan. Haddii aysan arkin, way baxaan. Laakiin haddii ay helaan, waxay gabi ahaanba ku lumiyaan sida ugu badan ee ay wax u akhriyaan, u baaraan una wadaagaan.
Haddii shirkaddaadu aragto hoos u dhac weyn oo waqti ku qaatay bogga ama goobta, waxay noqon kartaa sababo dhowr ah:
Cinwaannadaadu uma dhigmayaan waxa aad ka kooban tahay. Waxaa laga yaabaa inaad isticmaaleyso hababka isku xidhka si aad dadka u soo jiidato ka dibna nuxurka ma aha mid taajir ah - taasi waxay ka dhigeysaa qof walba inuu baxo!
Waxaad udiyaarineysay waxyaabo qaldan. Haysashada bartaada tan oo ah isku darka ereyada muhiimka ah ee aanad awood ugu lahayn waxay kordhin kartaa sicirkaaga soo kabashada waxayna yareyneysaa waqtiga aad ku bixisay bartaada. Ku qor bartilmaameedka - markasta!
Waxaad ku xayeysiinaysay ololeyaasha raadinta lacag bixinta ee liidata. Booqde kasta oo cusub oo ku soo gala goobtaada ayaa laga yaabaa inuu waqti ka yar ka qaato dadka soo noqda. Kordhinta ololayaasha waxay yeelan kartaa hoos u dhac ku yimaada waqtiga goobta maadaama martida cusub ay ka helayaan (ama aysan helin) waxay u baahan yihiin.
Ma maalgashanaysid istiraatiijiyado nuxur ah oo kicinaya kaqeybgal qoto dheer - sida faahfaahinta sawirada, bandhigyada, ebook-yada, waraaqaha cadcad, daraasadaha kiisaska, markhaatiyada, fiidiyowyada sharraxa, qalabka is-dhexgalka, iwm.
Waxyaabaha fudud ee la cuno ma ahan istiraatiijiyad la geeyo maxaa yeelay feejignaanta ayaa hoos u dhaceysa (maahan!). Waxyaabaha fudud ee la cuno ayaa ah rootiga u horseedda dadka bartaada mawduucyada ku habboon si ay uga helaan hawlgal qoto dheer macluumaadka ay raadinayaan.
Waxaan kugula tartami lahaa inaad ku sameyso falanqeyn ku saabsan isbeddelada iyo waqtiga bogga ama bogga waxaadna ka heli doontaa in waxyaabaha beddelaya ay weli yihiin nuxur qaab-dheer ah. Daraasad aasaasi ah, waraaqo cadaan ah, daraasado kiis iyo faahfaahsan, qoraalo qoraallo hodan ku ah ayaa sii wada wadida tan iyo kaqeyb galka waxayna u horseedayaan isbadal.
Horumarinta adiga istaraatiijiga suuqgeynta waa inuu ku lug yeeshaa dhismaha waxyaabaha heerar kala duwan ee ka qayb qaadashada si markaa, maadaama macaamilka ama ganacsigu uu aad u daneynayo, ay si qoto dheer ugu dhex milmi karaan cilmi baarista ay u baahan yihiin.
Waxyaabaha fudud ee la cuno ayaa booskeeda leh, laakiin looguma talagalin fiirogaar gaaban. Waxaa loogu talagalay dadaalka ugu yar iyo dhagaystayaasha ballaaran si ay u soo jiitaan martida qoto dheer! Waxay ciriirineysaa biyaha halka sedka dhabta ah uu sugayo hadafkaaga.
Iyada oo maskaxda lagu hayo, xogtan oo ka socota Oracle waxay leedahay aragti fiican oo ku saabsan istiraatiijiyadda maaddooyinka fudud.
Tags: infographicOraclewaxyaabaha fududwaqtigawaqtiga boggawaqtiga goobtawaqtiga lagu qaatay kalfadhigawaqtiga ku qaatay boggawaqtiga ku qaatay goobta
24, 2014 at 8: 59 AM
Waan ka nastay markaan maqlo in booqdayaasha shabakada ay waqti badan ku bixinayaan barashada boggaga macmiilkaaga sidii ay ahaayeen 1 - 2 sano ka hor. Adduunyada maanta ee qaniinyada dhawaaqa, taasi waxay si fiican ugu habboon tahay kuwa naga mid ah ee aaminsan in la maalgeliyo waqtiga si loo abuuro nuxur feker leh, oo si fiican loo baaray!
29, 2014 at 9: 56 AM
Tani waa mid cajiib ah! Aad ayaan ugu faraxsanahay muhiimadda macluumaadka-hodanka ku ah, foomka foomka dheer aan hoos u dhicin.
Waan jeclahay marka qof sameeyo sheegasho gaar ah oo geesinimo leh oo caqabad ku ah fikradaha caanka ah
Waad ku mahadsan tahay si ka badan